Inertia ye-Thermal: iimpawu, ukusetyenziswa kunye nokubaluleka | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
La inertia eshushu luphawu lwemathiriyeli, isixelela ukuba bungakanani ubushushu obuqulathwe yinto kwaye ngesantya esenza ngaso okanye ibugcine ubushushu. Ukuguqulelwa kwisakhiwo, sinokuthi ngokukhawuleza ukuba ngathi ubunzima bendlu buthatha ngokuthe ngcembe amandla kwaye bukhuphe ngokuhamba kwexesha.
Kule nqaku siza kukuxelela yonke into oyifunayo ukuba uyazi malunga namandla ashushu, ukusetyenziswa kwayo ekwakhiweni kunye nokubaluleka kwayo.
1 Yintoni inertia ye-thermal
3 Ukubaluleka kwe-inertia ye-thermal ekwakheni
4 Iindlela zokwahlula
5 Ukhuni lokuphucula inertia ye-thermal
Yintoni inertia ye-thermal
I-inertia ye-Thermal bubuchule bento ethile yokugcina amandla obushushu afunyenweyo (ubushushu), ulondoloze kwaye uyikhulule ngokuthe ngcembe. Umthamo wokugcina amandla wento ixhomekeke kumgangatho wayo, ubuninzi kunye nobushushu obuthile.
I-inertia ye-thermal yezinto ezisetyenziswe kwisakhiwo yenza kube lula ukugcina ubushushu obuzinzile imini yonke kwindawo yokuhlala yangaphakathi. Ehlotyeni, izixhobo ezine-inertia ephezulu ye-thermal zifunxa ubushushu emini, kwaye ngenxa yomahluko weqondo lobushushu phakathi kweendawo zangaphakathi nezangaphandle, zigcinwa ngokuthe ngcembe kwaye zichithwe ebusuku (ubushushu beeyure ezininzi). Ngentsasa elandelayo, izinto zinciphisa ubushushu bayo kwaye ziqala ukujikeleza kwakhona: ifunxa ubushushu emini kwaye ikhuphe ubushushu ebusuku.
Kwiminyaka emininzi, ilizwe lethu alizange liqwalasele oku (i-brick boom), kwaye izakhiwo zethu zinokuncitshiswa ngokusisiseko ukuba zijongane nezitena kunye namagumbi okuzihlukanisa. Kunamhlanje xa iimpawu zezixhobo ziqwalaselwa kwakhona ukuphucula ukusebenza kakuhle kolwakhiwo. Izakhiwo ezifunxa ubushushu emini kwaye zinike ubushushu ebusuku zifuna amandla amancinci okufudumeza nokupholisa.
ESpeyin, ukususela kwikhowudi isakhiwo sobugcisa saqala ukusebenza ngo-2006 kwaye sahlaziywa ngo-2013, iintlobo ezithile zezakhiwo kufuneka zithathe inzuzo yolu phawu lwezinto eziphathekayo.
Ukubaluleka kwe-inertia ye-thermal ekwakheni
Xa ngoku sisebenzisa iinkqubo ezivunyiweyo (CE3X, CE3, okanye HULC) ukubala ukulinganiswa kwamandla, kufuneka siqwalasele imvulophu yokwakha. Apha sinokubona into efana "nesikhumba sesakhiwo." Ulusu lwesakhiwo luya kuba luphahla, i-facade, i-windowsill, njl.
Olu "lusu" lwesakhiwo kufuneka luchazwe ngokuchanekileyo ngokunokwenzeka kwiprogram, kuba ingcali ingena kwinkqubo ngokweempawu zezinto eziphathekayo, ifunda i-database yayo ebanzi, iguqulela i-inertias ye-thermal eyahlukeneyo yezinto eziphathekayo, kwaye iyiguqulela kuyo. idatha yokudluliselwa kobushushu.
Kubo, xa igcisa lenza isatifikethi samandla, bayakwazisa indawo ebiyelweyo ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo:
Ukuhlala kukho: Xa ingcali ingena kwidatha yeqokobhe, ngenxa yokungabikho kwamava okanye ukungazi, ukhetha ukhetho "oluhlala lukhona", inkqubo iya kuyazi imilo ethile ngokomhla wokwakha, kwaye iya kuba yifudumala yobushushu. Ingxaki ngokufaka idatha ngale ndlela kukuba "sinciphisa" kwaye amanqaku anokuba ngaphantsi kwamanqaku esiwafumanayo xa sisebenzisa enye yezinye iindlela.
Sithandwa: Ngokufaka idatha njenge "uqikelelo", inkqubo iya kusikhokela kwaye ichaze umxholo wokutshintshwa kobushushu. Ngokusekelwe kwimibuzo embalwa, efana nomhla wokwakhiwa kwendlu, sicinga ukuba i-insulating, njl. Iya kunika idatha yokudlulisa ubushushu.
Kwaziwa: Oku kuya kuhlala kuyindlela efanelekileyo yokufaka idatha yeendawo ezivaliweyo kwiiprogram. Sinokwenza i-enclosure, ngokuthe ngcembe singenise iileyile (ukusuka ngaphandle ukuya ngaphakathi).
Kudla ngokuthiwa iipropathi zezinto ezintle zokukhusela ekhaya ziya kukhankanywa, ezo zinto zisikhusela ebusika ebusika, kodwa sithintela njani ngokufanelekileyo ukuthintela ubushushu kunye nokuqhaqhazela? Ihlobo elitshisayo phakathi no-Agasti lisenza sizive ukubaluleka kokuzikhusela ekugqithiseni kwindlu, kusenze sikhululeke ngaphandle kokuchitha amandla okupholisa.
Ingakumbi kwisithuba esingaphantsi kwedekhi, ukukhethwa kwezinto zokukhusela ukushisa kunye neempawu ezifanelekileyo kunye neziphumo ezaziwayo kwisakhiwo, ezifana nolungiselelo kunye nobukhulu beefestile, ii-facades ezinomoya kunye nophahla, kunye nokuqina komoya, zibaluleke kakhulu.
Yindlela yokwenziwa, ethatha inzuzo yomahluko kwiqondo lokushisa phakathi kwendawo yokwakha kunye neendawo eziyingqongileyo, ithobisa ukungafani kwe-thermal, ibenze izinze ngakumbi kwaye ilibazise ukuhanjiswa kobushushu (ixesha le-lag) ukufezekisa induduzo enkulu ye-thermal ngaphakathi.
Le ngcamango ye-inertia ye-thermal ingundoqo kwiimozulu ezineenguqu ezibalulekileyo zemihla ngemihla zokushisa ukufezekisa enye yeenjongo ezibalulekileyo ekhaya: ukuzinza kwe-thermal; ukuba iqondo lobushushu liyahluka kancinane kakhulu kwaye alityi amandla agqithisileyo ekulondolozweni kwayo.
Ukhuni lokuphucula inertia ye-thermal
I-Wood yizinto zokwakha ezinomthamo ophezulu ophezulu wokushisa, i-2100J / kg, kwaye kwangaxeshanye inoxinaniso oluphezulu kunye ne-thermal conductivity ephantsi. Iimpawu zayo zendalo zenza i-insulators yendalo yomthi we-fiber ibe yinto enomthamo ophezulu wokugcina ubunzima be-thermal: bane-inertia ephezulu ye-thermal, eqinisekisa ukuguquguquka okuphantsi kakhulu kwiqondo lokushisa langaphakathi, eliyindawo apho ubushushu bangaphandle bubonisa utshintsho olukhulu phakathi kwemini kunye ne-thermal. busuku
Ngokomzekelo, ukuba i-fiberboard ye-180mm isetyenziselwa ukugcina ubushushu, ixesha lokulibaziseka (ukulibaziseka) ukufunxa ubushushu kunye nokuchithwa kufikelela kwiiyure ze-10. Njengoko kubonisiwe kulo mfanekiso ungezantsi, Ubushushu bomoya wangaphandle buguquguquka kwi-21ºC kwaye umoya wangaphakathi uguquguquka kwi-3ºC (i-coefficient yokudambisa = 7).
Ukongeza kwi-inertia ephezulu ye-thermal, i-fiber fiber insulators ivulekele ukusasazwa komphunga (μ ixabiso = 3) kwaye ulungelelanise ukufuma komoya ngokufunxa okanye ukukhupha umoya, ngokuxhomekeke kwiimeko zegumbi. ukuya kuthi ga kwi-20% yobunzima bayo kwindawo efumileyo ngaphandle kokulahlekelwa ngumthamo wokugquma. Ukudibaniswa kwezi mpawu zimbini kunempembelelo entle kwiimeko eziphantsi kwegumbi.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga namandla ashushu, iimpawu zayo kunye nesibophelelo sayo kwintsimi yokwakha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Ikhaya eliGreen » Inertia yobushushu
Sebenzisa kwakhona isikhokho esimhlophe